/ Products / Qaar kale waxay / Clostebol Acetate (Turinabol) budada
Rating: SKU: 855-19-6. Category: Qaar kale waxay
Qaaciddada Molecular: C21H29ClO3
Miisaanka kelli: 364.91
Budada Clostebol Acetate (Turinabol) (CAS 855-19-6), oo leh magaca 4-chlorotestosterone, sidoo kale leh magac magac Tbol, Macrobin, Steranabol, Alfa-Trofodermin, Megagrisevit.
Clostebol waa AAS daciif ah oo loo adeegsan karo sida daroogada kor u qaadaysa waxqabadka. Waxaa hadda mamnuucay Hay'adda La-dagaallanka Doping-ka Adduunka. Oral Turinabol, oo isku daraya qaabdhismeedka kiimikada ee 'clostebol' iyo 'metandienone', ayaa si ballaadhan loogu isticmaalay barnaamijka dawada dawada ee ay maal-galisay Bariga Jarmalka.